Waxaa laga yaabaa in qalab ugu awooda badan ee aad Raadka Arsenal ka dib markii, tibaaxaha awood inaad gaarto saamayno aad soo saaro qiimaha u-beegyada uu ka badan ka dibna lagu xiriirin karaa falalka kale. Feature asaasiga ah ee tibaaxaha waa in ay hoos u dhigi baahida loo qabo in boqolaal keyframes gacanta set for animation iyo mooshin kasta oo ay dhaceen shaqada la helo geeddi-socod badan oo deg deg ah.
1. Howl hadal ah in ay u dhimaya nabadgelyada ah
Si ay u muujiyaan isticmaalka aasaasiga ah ee tibaaxaha, waxaan abuuray halabuurka cusub iyo kaalinta 2 lakab adag ku yaal. Mid ka mid hoose waa madow, mid labaad waa buluug.
Haddii aan haatan opacity ee lakabka buluug eber bilowgii waqtiga, kaliya aad ku arki kartaa lakabka madow hoose.
Haddii aan doonayay inaan dhigay opacity ee lakabka buluug ah in si tartiib tartiib ah u kordhi, waxaan laga yaabaa, in tusaale ahaan this, isticmaali keyframes si fudud u dhaxaysa laba barood oo si aad ku gaarto, si kastaba ha ahaatee waxaan ku dari kartaa hadal ah halkan si aad u muujiso sida ay u shaqeeyaan.
Doorashada dhimaya la doortay, ka dibna mid ka mid maraya Animation> dar Expression ama toobiye ee haysta Alt (ama Option for Mac) halka gujinaya stopwatch kor u furmo sanduuqa qoraalka ah. Waxaan la isticmaalayo opacity, iyo sanduuqa qoraalka waxaan ku qor waqtiga * 7.
Waa maxay waxan sameeyo waa isticmaalaan qiime go'an oo ah in ilbidhiqsi, ku tarmaan oo ay 7 iyo dhigaya opacity ee lakabka buluug at in. Sidaas ka jirin waxa ay kor u kacdaa ilaa ay ka gaarayso ugu badnaan ay of 100. Haa, taasi waa mudaaharaad aad u fudud balse mabda 'tani waa sida tibaaxaha shaqeeyaan, oo ilaa hadda fududahay waa inay haleelaan fikradda ka noocyada kala duwan ee tusaalooyin.
Waxaa jira waxyaabo qaar ka mid ah in la ogaado oo ku saabsan dhimaya ah marka aad kaalinta hadal ah ku yaal. Marka hore, waxaad arki doontaa qiimaha la soo bandhigay in casaan. Tani waxay muujinaysaa waxaa la gacanta ku hadal ah oo lama gacanta bedelay.
Waxa kale oo aad la soco doono waxaa ka mid ah badhamada dheeraad ah ilaa dhinaca reer calaamad muujinta. Qofka ugu horeeya ee waa = calaamad, tani waa badhanka si dami muujinta ku meel gaar ah oo aan la tirtiro, sida aad tijaabiso ama shaqeeyaan iyada oo isku xigxiga oo tusaale ahaan. Ku labaad waa button garaaf oo awood qiyamka ah ee ra'yi dhiibashada in la dhagreen gudahood aragtida garaafka ah.
Sida aad ka fili lahayd ka formula loo isticmaalo, garaafka muujinaysaa opacity soo baxna la waqtigii lakabka buluug ah.
Button saddexaad waa badhanka karbaash qaado oo awood na si ay u abuuraan tibaaxaha fudud aad u fudud. Waxayna jiidayeen karbaash qaado ka mid dhimaya in kale abuurtaa xiriir live u dhexeeya labada dhigaya qiimaha dhimaya hadda ka qiimaha kale ee. Wixii link fudud in uu yahay hab aad u deg deg ah u gaaro.
Tusaale wanaagsan waxaa weeye haddii aan furo hadal ah u warejin, iyo jiidi karbaash qaado ay u gal dhimaya naga opacity in uu weli ku dhow inay sii kordhaan.
Waxaan misigta lakabka buluug wax yar si aad u arki karto saamaynta ku yiilleen halkan.
Maxaa dhacaya marka aad haatan ciyaaraya, waa in aan kaliya sameeya kororka opacity ah sida ka hor, lakabka sidoo kale isku bedbedeli doono waxaa la.
Sida aad arki karto, awood u leh inay ku xirmaan koobin kala duwan awood karaa xiriirka arrin adag in la aad si fudud oo dhaqso gaaray.
Waxayna jiidayeen karbaash riyaaqaya sidan abuuri karaan noocyada la mid ah xidhiidhka guud ahaan layers kala duwan, u sii ballaarin fursadaha.
Waxaa xusid mudan in wixii karbaash ka qaadista ay muujineyso in nuxurka waa in auto abuuro tibaaxaha ah ee xidhiidhka la leh laydiin bixiyey, waxaad isku samayn kartaa gacanta haddii aad si fiican u yaqaanna ee tibaaxaha, iyo waxa muhiim ah in la xasuusto in aad edit karaa qoraalka abuuray by karbaash riyaaqaya inuu wax ka beddelo saamaynta haddii aad rabtid in aad.
Button The final waa editor luqadda, kaas oo u ogolaanaya in aad dooratid weedha fahmay ka dib Waxyeellada ka fursadaha kala duwan halkii aad qortid ka xasuusta. Xulashada mid ka mid ah meelaha ay u soo galeen bar hadal qoraalka.
Waxaa jira eray-bixinta qaar ka mid ah aad u baahan tahay si aad u hesho in ay ku duuban leh marka la tibaaxaha ka shaqeeya, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn yihiin fallaadhaha iyo arrays. Si taas loo tuso waxaan kuugu dari lakabka cusub qoraalka ay ku jiraan Expression hadalka on top mashruuca aannu hadda jira ee. Haddii aan u isticmaalno karbaashka in ay ku xidhmaan ku soo koobin booska iyo opacity, waxaad arki doontaa qiimaha ee ra'yi dhiibashada yahay
meel gaarka = transform.opacity;
[Meel gaarka, sharikadaha]
Fiiro u yeelo in uu abuuro laba qiyamka, taasi waa sababta oo ah inkastoo opacity uu qiimo hal, meel u baahan tahay laba (3 haddii ay daaha 3D dabcan) qiimaha si ay u shaqeeyaan, x iyo y qiimaha.
The tibaaxaha ay ku jiraan laba ama in ka badan qiimaha waxaa lagu magacaabaa fallaadhaha ama arrays. Waxay caan ku tahay ka dib Raadka, wax walba oo ka dhibcood ay noqoto, jagooyinka inay qaaddo yihiin waxaa ka mid ah in ka badan hal qiimaha.
Fadlan la soco, in kasta oo waraaqo ugu muuqataa in ay isticmaalaan erayada badadanaa, dulinka ah waxay ka kooban tahay tirada oo keliya, halka diyaariyeen ah waxaa ka mid ah ereyada ama shay qoraal kale.
By ay ka mid yihiin tiro qaansada ka dib markii qiimaha kasta (sida dhibic ay noqoto , dhibic ay noqoto  iyo wixii la mid ah, had iyo jeer lagu bilaabo 0 waayo, kii hore) diyaariyeen ah, kuu gudbin karaan iyaga si toos ah iyo Macdan kaliya in qiimaha, tan waxaa loo yaqaan Indexing. Sidaas darted, haddii aad doonayso inaad qiimaha y ee meel ka, waxaad isticmaali lahaa Jago  (qiimaha labaad) iyo tan laaban doono qiimaha y dhidibka waqti dhibic in.
3. Ballaarinta on weer
Sida aynu ka arki kartaa, wax si deg deg ah noqon karaan kuwo adag oo la tibaaxaha, inkastoo ay bixiyaan hab qoto dheer gacanta u animations adag oo sidaas, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in la filayaa.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira war wanaagsan oo qaar ka mid ah, dad badan isticmaalaan ballaaran oo ka mid ah awoodaha tibaaxaha aan kasta oo si buuxda u qaadan in ay ku duuban luqada. Tani waa sababta uu jiro ogaaaday ka mid ah maktabadaha hadal internet-ka, halkaas oo aad ka heli karto oo nuqul ka tibaaxaha muddo ku dhow wax kasta oo aad ka fekeri karto, oo dhan lacag la'aan ah.
Hadda mid baa odhan doona tani waa toobiye ah oo aanu caawin muddo dheer ah, laakiin aan ku raacsanayn, oo halkan waa sababta. Sababtoo ah waxaad ka arki kartaa ra'yi dhiibashada iyo sidoo kale waxa ay ku yahay, oo adeegsanaya dadyow kale waa hab cajiib ah in la fahmo sida ay wax u gaari, waxaad iyaga ka beddeli kartaa oo baro sida ay sameeyaan waxa ay sameeyaan, waa hab fiican oo ma aha oo kaliya hesho qaar ka mid ah saamaynta weyn si dhakhso ah, laakiin waa inuu bartaa sida loo cilinta saamaynta mid ah naftaada ka xoq.
Dadka qaar si fudud u isticmaali karaa maktabadaha hadal oo aan marnaba la fiirin kasta oo dheeraad ah, laakiin waxaan qabaa in kuwa u isticmaalaan sida qalab waxbarasho, ay yihiin ilaha fantastik ah iyo sida ugu fiican in ay u fidisaa aqoonta hadal aad.
Sida loo sameeyo Intro ah ka dib Raadka
Sida loo sameeyo 3D Animation in dib markii Raadka
Talooyin Dhibaatooyinka ah ee Streaming Media in Roku
> Resource > Video > Sida loo isticmaali tibaaxo in dib markii Raadka